राष्ट्रपतिका कारण बलात्कार बढेको आरोप « News24 : Premium News Channel
राष्ट्रपतिका कारण बलात्कार बढेको आरोप
बझाङ, ०६ फागुन । सदरमुकाम चैनपुरमा विरोध सभामा उपस्थित महिलाहरुले राष्ट्रपतिले गर्दा नै बलात्कार बढेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल महिला संघ जिल्ला कार्य समिति बझाङले विहीबार आयोजना गरेको विरोध सभामा खेलिएको देउडा खेलमा राष्ट्रपतिका कारण देशमा बलात्कार भएको आसयका गीतहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल महिला संघका केन्द्रिय अध्यक्ष माननिय डा. डिला संग्रौलासहित बझाङ पुगेकी महिला नेतृहरु देउडा खेलमा सहभागी थिए । नेतृहरु सहभागी खेलमा नै “विद्या तेरा लाग्दा कतिका बलात्कार भया” अर्थाथ विद्या तिम्रो लाग्दा धेरैको बलात्कार भयो भन्ने गीतमा देउडा खेलिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानको हितमा नरहेको भन्दै नेपाली काँग्रेस र उसका भातृ संगठनहरुले यतिबेला देशैभरी विरोध ¥याली गरि रहेका छन् । एक तहको नेतृत्व सहभागी भएको सभामा यतीसम्मको भाषा प्रयोग हुनु जाहेज नभएको सभामा नै सहधागी एक महिलाले बताइन् ।
महिलाले महिलालाई नै यसरी निराधार आरोप र तुच्छ भाषाको प्रयोग गर्नु ठिक होइन् कार्यक्रममा नै सहभागी एक महिलाले बताइन् । उनले भनिन् “क्या विद्याले झाउ तमी अरुकी चेलीखी बलात्कार गर भन्यो होइ क्या बा १ मान्छेले बुद्धी पु¥याएर बोल्न जान्नु पर्छ । ज्या मनमा लाग्यो त्यो बोल्न पाइन्छ ? ”
नेतृत्व वर्गको मान्छेले के बोल्छ भन्ने कुरामा सवैको ध्यान हुन्छ नै । तर विरोध कार्यक्रमको समापन पछिको देउडामा भनिएका गीतहरुले भने नेर्त संग्रौला र उनको टिमलाई अफ्ठ्यारो बनाएको छ ।
उच्च पदस्थ र राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहेको महिला माथिको गलत र तथ्यहिन भाषाले नेतृ र उनको टिमलाई आलोचित बनाएको छ ।